Real Madrid Oo Qiimo Hoose Arsenal Ugu Soo Bandhigtay Saxiixa Gool Dhaliyaha Mariano Diaz. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Qiimo Hoose Arsenal Ugu Soo Bandhigtay Saxiixa Gool Dhaliyaha Mariano Diaz.
Maamulka kooxda Real Madrid ayaa Arsenal qiimo hoose ugu soo bandhigay saxiixa gool dhaliyaha Mariano Diaz kaas oo dheeraad ka ah qorshaha xili ciyaareedka cusub ee Zidane Zidane.
Inkasta oo uu Mariano Diaz qayb ka ahaa liiska ciyaartoyda Real Madrid ee maanta u safray dalka Canada, haddana waxaa soo baxay war sheegaya in Arsenal loo soo bandhigay in ay qiimo hoose ku iibsan karaan xidiga reer Spain.
Mariano Diaz ayaa waqti cajiib ah ku soo qaatay kooxda Lyon waxayna taasi keentay in xili ciyaareedkii la soo dhaafay ay Real Madrid dib u soo iibsatay balse markii uu Zidane soo laabtay waxaa god dheer ku dhacday rajadii uu ka qabay in uu Madrid sii joogo.
Wargayska Daily Mirror ayaa shaaciyay in Real Madrid ay Arsenal u soo bandhigtay saxiixa Mariano Diaz kaas oo ay ku heli karaan 18 milyan gini oo kaliya waana qiimo la filayo in ay Arsenal kula wareegi karto maadaama oo ay gool dhaliye suuqa ugu jiraan.
Arsenal ayaan wali helin badalka Danny Welbeck kaas oo kooxda laga fasaxay waxayna Gunners ka faa’iidaysan kartaa in Madrid ay qiimo hoose ku iibinayso Mariano Diaz oo tayo sare soo muujiyay.
Arsenal ayaa ku dhaw saxiixa difaaca dhexe ee kooxda St Etienne ee William Saliba kaas oo doonayaan in ay ilaa 22 milyan gini kula soo saxiixdaan.
Lacagta ay Arsenal u haysato suuqa kala iibsiga ayaa lagu sheegay 40 milyan gini waxayna suuqa ugu jiraan gool dhaliye fiican balse in Mariano Diaz loogu soo bandhigay 18 milyan ayaa maamulka Emirates Stadium soo jiidan karta.
Real Madrid ayaa dadaal wayn ugu jirta in ay kooxdeeda ka dirto ciyaartoyda aan ku jirin qorshaha Zidane iyada oo haddaba xidigo badan amaah ama iib lagu diray.
Ilaa hadda lama oga haddii ay Arsenal xiisaynayso saxiixa Mariano Diaz iyo dalabka hoose ee ay ku iibsan karaan iyada oo la filayo in ay kooxo kale ku soo biiri karaan tartankiisa.